पिसिआर परीक्षणमा मात्र राज्यको ३ लाख १८ करोड खर्च ! « Pen Nepal
पिसिआर परीक्षणमा मात्र राज्यको ३ लाख १८ करोड खर्च !
Published On : 21 August, 2020 5:34 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । सरकारले शुक्रबारसम्म आरटी पीसीआर टेस्टमा मात्रै ३ अर्ब १८ करोड बढी खर्च गरेको छ । शुक्रबारसम्म जम्मा ५ लाख ७९ हजार ८९९ टेस्ट भएकोमा त्यसका लागि ३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार ५०० खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।